Ukwakhiwa kunye nokwahlulwa izixhobo eziphathekayo ukuxubana - China Shandong QianBaidu
Special Tower Crane
intloko Flat Tower Crane
Luffing series Tower Crane
Ukwakhiwa kunye nokwahlulwa izixhobo eziphathekayo ukuxuba
Ukwakhiwa plant eziphathekayo ukuxuba
isixhobo eziphathekayo Ukuxutywa yi isamente, aggregate, amanzi, admixture, admixture kunye nezinye izibonelelo ngokungqinelana neemfuno zomlinganiselo eziphathekayo ratio, waza waxhokonxa zibe Umxhubi iseti eziphathekayo izixhobo, eyaziwa ngokuba izityalo ukuxubana eziphathekayo (umgangatho). Eziphathekayo isixhobo Ukuxutywa kakhulu izixhobo eziphathekayo yokuphatha, izixhobo zokugcina izinto, izixhobo zokuthatha umlinganiselo, izixhobo ukuxuba kunye neenkqubo zolawulo kunye namanye amacandelo. Kubandakanywa izinto, aggregate, isamente, admixture, amanzi, ongeziweyo njalo njalo.
Ukuhlelwa izixhobo eziphathekayo ukuxuba
(A) ngohlelo ukuhamba
1. station ukuxuba Mobile
Esi sikhululo Ukuxutywa ngokuqhelekileyo isixhobo ukuhamba, unako ukudluliselwa nangaliphi na ixesha, ukuhamba ulungile. Ikakhulu lulungiselelwe ukuba ezinye iiprojekthi okwexeshana okanye mobile kakhulu, ezifana neendlela, iibrorho njalo njalo.
2. Ukudilizwa station yokuhlanganisa
Esi sityalo Ukuxutywa ibandla ezivela kumacandelo eziliqela ezinkulu, zibe ndawonye kwaye zezikhali ngexeshana elifutshane, kunye nokutshintshwa esakhiweni. Busetyenziswa kakhulu mveliso eziphathekayo yorhwebo kunye nokwakhiwa enkulu kunye naphakathi eziphathekayo.
3. Fixed floor ukuxuba
Oku sisityalo ukuxubana enkulu eziphathekayo kunye namandla amakhulu emveliso, busetyenziswa kakhulu mveliso eziphathekayo yorhwebo, isityalo lodonga kunye esakhiweni ezigcina amanzi.
(B) ngokungqinelana nenkqubo yemveliso yokuhlela
isixhobo Ukuxutywa eziphathekayo ngokutsho ubeko ubuchwepheshe yayo lungohlulwa lube olunye-eqongeni kunye kabini-yeqonga iindidi ezimbini.
(C) nezinye iindlela yokuhlela
isixhobo Ukuxutywa eziphathekayo ukongeza iintlobo ngentla ezimbini iindlela ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo yokuhlelwa, kodwa ngokutsho ingaba uqwalaselo kwezixhobo ukuxuba wongeze amanzi nokuxuba zibe eyomileyo kwisikhululo izinto kugecwa kwisikhululo ukuxubana emanzi, njengako ukuqwalasela yokondla rhoqo izixhobo yokuhlanganisa wohlulwe kwisikhululo ukuxubana oluqhubekayo kunye isikhululo ukuxuba gap.
ixesha Post: Feb-08-2018
Idilesi: Thenga 418, Block B, Fortune Building, Hong Kong Street, Zhangqiu, Shandong, China (wase-)